युगसम्बाद साप्ताहिक - खुल्ला त समृद्धिको बाटो ?
Thursday, 04.02.2020, 07:11pm (GMT+5.5) Home Contact
खुल्ला त समृद्धिको बाटो ?
Thursday, 04.04.2019, 01:36pm (GMT+5.5)
बहु प्रचारित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजक पक्षको दृष्टिमा उपलब्धिपूर्ण र उत्साहजनक सन्देशका साथ सम्पन्न भएको छ । विकास र समृद्धि प्रत्येक नेपालीको चाहना हो । नेपाल समृद्ध भए सवै नेपाली सुखी हुन्छन् । यसमा तर्क वितर्क गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । नेपाल आर्थिक विकासका दृष्टिले धेरै पछाडि परेको मुलुक हो । विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आन्तरिक पूँजी र प्रविधिले पुग्दैन तसर्थ नेपालको आन्तरिक विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ भन्ने मान्यता निर्विवाद जस्तै छ । नेपालको आन्तरिक विकासका लागि पाँच वर्षमा ८८ खर्ब रकम चाहिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी सम्मेलनको उदघाटन भाषणमा नै बताउनुभएको छ । दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारले राखेको पनि प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । यस पटकको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सरकारले आयोजनाहरू नै तोकेर वैदेशिक लगानीका लागि क्षेत्र तोकेको प्रष्टै छ । नेपाल वैदेशिक लगानीका दृष्टिले ‘भर्जिन ल्याण्ड’ नै रहेकाले यहाँ लगानी गर्न र मुनाफा कमाउन बचन प्रधानमन्त्रीले लगानी कर्ताहरूलाई दिनुभएको छ । के अब नेपालमा लगानी गर्न वैदेशिक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू यत्तिकै भरमा आकर्षित होलान् त ? यो नै अहिले आम नेपाली जनमानसमा उठेको जिज्ञाशापूर्ण प्रश्न हो ।
गत शुक्रवार सुरू भै शनिवार सम्पन्न भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रका गरी ७७ आयोजनाहरू वैदेशिक लगानीका लागी सोकेशमा राखिएका र छनौट भएका यी आयोजनाहरूमा ३० खर्ब भन्दा बढीको प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा सरकारले राखेकोमा १७ खर्ब ३० अर्बको मात्र प्रस्ताव स्वदेशी र विदेशी लगानी कर्ताले गरेका छन् । मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार स्थापित भएको र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि सम्बन्धित ऐन कानूनमा पनि सुधार गरिएकाले नेपालमा अब लगानी मैत्री वातावरण बनेको सरकारी कथन छ । सतहमा हेर्दा यसमा खासै विमति राख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । तर २०४८ को पहिलो लगानी सम्मेलन र २०७३ सालको दोस्रो लगानी सम्मेलनको नतिजा हेर्दा सम्मेलनको बहुप्रचार र प्रतिबद्धताकै आधारमा मात्र लगानी भित्रिन नसक्ने रहेछ भन्ने तथ्य उजागर भैसकेको वास्तविकता हो । हिजो भएन त्यस कारण अब पनि हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुको कुनै औचित्य छैन तापनि विगतका अनुभवले सिकाएको पाठ विर्सिन पनि सकिन्न । विगतका कमी कमजोरी केलाउनु र राज्यले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयमा विश्वास गर्नसकिने वातावरणको सिर्जना गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । राजनीतिक खपतका लागि मात्र सकारात्मक भ्रमको खेति गर्ने जुन प्रवृत्ति विकसित छ त्यो नहटेसम्म विश्वसनीय वातावरण बन्न सक्दैन भने लगानी आकर्षित हुने सम्भावना त धेरै टाढाको कुरा छ । अहिलेको स्थिति भनेको पनि आश गर्नु भर नपर्नु भनेजस्तो कतै नहोस् ।
वित्तीय क्षमता दह्रो भएका मुलुकहरूले पनि आफ्नो उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न वैदेशिक लगानीको अनिवार्य आवश्यकता महसुस गरेर आकर्षक प्रस्तावका साथ लगानी भित्य्राउने गरेका उदाहरण हाम्रै छिमेकमा छन् भने वित्तीय क्षमता कमजोर रहेको र विकास र समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारसमेत विकसित नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता अपरित्यज्य नै छ । तर विगतमा वैदेशिक सहायता र ऋण लगानीका हाम्रा विकास आयोजनाहरूको अनुमानित लगानी र प्रतिफलमा देखिएका समस्याहरू अहिले पनि विचारणीय नै छन् । हाम्रा विकासका अवधारणाहरू हामीसंग सुरक्षित रहेको कच्चापदार्थको उपयोग, उपलब्ध जनशक्तिको परिचालन र आन्तरिक पूजीको संलग्नता जुटाउने तर्फ लक्षित नभै केवल वैदेशिक लगानीकै अनिवार्यतातिर आकर्षित हुने गरेका छन् । विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने धेरै वैदेशिक लगानी भित्य्राउने मुलुकहरू विकसित भएका उदाहरण कमै रहेका छन् । राज्यले आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने र मुलुकको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरी समष्टिगत आर्थिक नीति बनाउनसके मात्र आर्थिक रूपान्तरणको चाहना पूरा हुनसक्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि आन्तरिक क्षमताको विकास अनिवार्य छ । अहिले कै मति र गतिले हाम्रो विकास र समृद्धिको बाटो खुल्ला त ? यो नै अहिले सर्वाधिक चासो र सरोकारको प्रश्न हो ।